5 Best iilekese Local Ukuze Zama EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Best iilekese Local Ukuze Zama EYurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 22/05/2021)
iilekese Local kufika kwiintlobo ezininzi kulo lonke elaseYurophu. Kuwo onke amazwe ngingqi abaphathana yayo kancinane siyaziqhenya ukunikela. Abakhenkethi kunye nezinyo esimnandi, akukho nto ngakumbi elinesoya malunga abahamba ngaphezu bathanda ezintsha. Nazi phezulu yethu 5 best iilekese zendawo ukuzama eYurophu.
1. A Sweet Local – Mozartkugel, Salzburg, Ostriya
Enye ye okudume kakhulu kunye neelekese zendawo edumileyo eYurophu nguye Mozartkugel. Njengoko siyazi, Paul Furst wadala iresiphi original e Salzburg kwithuba elingaphezu kwekhulu leminyaka. It is a sekhombuya esinee imphathe chocolate kunye zepistasi eluhlaza kunye nougat.
Kukho iinguqulelo ezininzi mali kwimizi-ezenziwe, kwaye liyafumaneka kwiivenkile ezinkulu. kunjalo, uguqulelo original ayikho ibiza kakhulu, kwaye kubalulekile ukuba umahluko phakathi kwexabiso. Kukonke, ke omnye iilekese lobulali elingcono ukuba yoyigodusa kuhambo lakho Austria.
2. A Sweet Local – amagwinya, Berlin, Jemani
Akuyomfuneko ukuba tie ulwimi lakho iqhina ukuba bathi igama lale sweet lendawo. Abantu ulenze lufutshane ukuze Berliner ngaphandle Berlin, kunye namakhekhe e Berlin. Ngokungafaniyo namafetshu anesiraphu American, abanalo umngxuma iziko. Xa ulandela iresiphi zemveli, ufumana ibhola esimnandi elimnandi, ezaliswe jam okanye marmalade, neswekile icing.
3. stroopwafel, Amsterdam, Inetherlands
stroopwafel yenye iilekese zasekuhlaleni sikhobokisayo umntu ukufumana eYurophu. Ngokungafaniyo nezinye iilekese ezininzi, akukho mpikiswano kwi owasungula iresiphi nalapho. Bakers kwisixeko Dutch of Gouda wenza kuqala. Ngenxa baphindele baze bahambe kakuhle, benza ezizoba kakhulu.
nezonkana ezisicaba ezimbini ezingcakacileyo, yazizisa ndaweni-nye kunye caramel "glue" ukwenza enye Stroopwafel. Nangona lithe lalila ezizodwa, isibheno jikelele kuzenza enye iilekese lobulali elingcono. Ezi iilekese wenze kwa- ephelele emva kosuku olude uloliwe-tsiba, shopping, kunye webhayisikile dodging - yonke imisebenzi Amsterdam boqobo.
4. Pastry Danish, Copenhagen, Dominikha
Nangona Denmark incinci, kumabali iilekese yayo lobulali elingcono ukuhamba kude. khekhe Danish waya eDenmark neqela waboji bezonka Austrian. Kanjalo, ukuba uguqule iresiphi kule minyaka, nabafuduki ezininzi yaseScandinavia Balizisa eMelika. kunjalo, uya kunandipha kakhulu kweli lizwe apho waboji bezonka ezingcwele lugqibelele kuyo.
Le Danish sweet wengingqi yenye yezinto kunenye uya kusiva. Wababhaki ephezulu it off nge jam, cheese, okanye cream sokufaka ukuba nangokuvulelekileyo laseScandinavia ogqibeleleyo. Nangona esisityebi kunikeza calories, emva kosuku kokuphonononga Copenhagen kwikhephu, uya kunandipha zombini ezi mpawu.
5. Cuberdon, Bheljiyam
Cuberdon yenye iilekese ingcono kakhulu asithe lendawo eYurophu. Kuyinto hat-emise, isoloko imfusa, kwaye izaliswe ngokugcwalisa i-raspberry. Xa ke niyagrenyana zibe enye, amazinyo akho Wabekeleni nina phakathi ethambileyo ukugcwala lula. Bahlala beyibiza ngokuba yiBelgium eyona mfihlo igcinwe kakuhle. Ngenxa yokuba kunzima ukuba siyigcine emva kweeveki ezimbalwa, abayithumeli kumazwe angaphandle rhoqo. kunjalo, umkhokeli ofuna ukuzama into unique ndiwuxinzelele ekhaya, i cuberdon uphelele.
Ingaba ufuna ukongeza iswekile kunye namakha ebomini bakho kwaye uthathe uloliwe tour ukudla lonke elaseYurophu? Incwadi Amatikiti zakho Namhlanje!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Best iilekese Local Ukuze Zama EYurophu” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-local-sweets-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#Dominikha #iilekese chocolate eurotrip travelaustria zoorbelgium travelgermany travelnetherlands